ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Pump Head တွက်နည်း ( အဲယားကွန်း ပညာ )
Pump Head တွက်နည်း ( အဲယားကွန်း ပညာ )
Pump head isameasure of energy. The units of energy are expressed in feet or meters. Pump head သည် စွမ်းအင် ပေ သို့ မီတာ (feet or meters)ကိုဖော်ပြသည့် နည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ဖိအားဆိုသည်မှာaunit of area အပေါ်သို့ သက်ရောက်နေသော အားပမာဏတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁ ပေါင် အားပမာဏ သည် တစ်လက်မပတ်လည် ဧရိယာပေါ်တွင်သက်နေရောက်နေလျှင် ဖိအားasquare inch of area, or PSI ဟုခေါ်သည်။ အရပ်သုံးစကားအရ "လေပေါင်တစ်ပေါင်" အားဟုပြောဆိုလေ့ရှိသည်။
သိုသော် 1 PSI ကို (ft of water) နှင့်ဖော်ပြမည် ဆိုလျှင် Head (ft. of water)/2.31 = PSI and PSI x 2.31 = Head (feet of water)
pumps များအတွက် , 70 feet of head ကို ပို့ပေးနိင်သည့် Pump သည် 30 PSI of differential pressure across the pump (i.e., 70 feet/2.31 = 30 PSI.)
pump manufacturer များသည် တစ်ညီတညွတ်တည်း “head” သည် ဝေါဟာရကို အသုံးပြုကြသည်။ Pressure ဟုပြောဆိုလျှင် pump မှတွန်းနိုင်သော Pressure သည် တွန်းပို့မည့် liquid ၏ the weight (specific gravity) နှင့် the specific gravity changes with temperature, fluid အမျိုးအစားနှင့် and fluid concentration တို့ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
“head” များကို တိုင်းတာသည့် အခါ the center line of the pump မှ တဆင့် the highest liquid level အထိတိုင်းတာလေ့ရှိသည်။
pump၏ suction ဘက်နှင့် discharge ဘက်တို့
resistance in the piping, fittings and valves တိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော Head ကို friction head ဟုခေါ်သည်။ any pressure that might be acting on the liquid in the tanks including atmospheric pressure ကို " surface pressure head"ဟုခေါ်သည်။
the Static discharge head ထဲမှ the Static suction head ကို နှတ်လျှင် Static Head ကို ရသည်။
System head = total discharge head - total suction head ( တစ်ခါတစ်ရံ Static ဆိုသည့် စကားလုံးကို friction head မပါဝင်ပါ ဟုသိသာစေရန် ထည့်သုံးသည်။)
hsd = discharge static head (discharge ဘက်တွင်ရှိသော Elevation ကြောင့်ဖြစ်သည့် static head)
hpd = discharge surface pressure head ( Open System များတွင် atmospheric pressure ကို ဆိုလိုသည်။)
hfd = discharge friction head ( fluid စီးဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော Pressure losses များ)
hs = hss + hps - hfs
hss = suction static head (suction ဘက်တွင်ရှိသော Elevation ကြောင့်ဖြစ်သည့် static head)
hps = suction surface pressure head ( Open System များတွင် atmospheric pressure ကို ဆိုလိုသည်။)
hfs = suction friction head ( fluid စီးဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော Pressure losses များ)
"feet of liquid gauge" သို့မဟုတ် "feet of liquid absolute" ယူနစ်များ အတိုင်း တွက်ချက်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ . "absolute ဆိုသည်မှာ the gauge reading တွင် atmospheric pressure (head) ကို ထည့်ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဤဥပမာသည် Opened System ဖြစ်သည်။ ACMV system များတွင် Cooling Tower သို့ Condenser Water pump ကို တွကပုံမျိုနှင့်ဆင်တူသည်။ ဤဥပမာ တွင် The suction head သည် အနှုတ် (negative) တန်ဘိုးဖြစ်ပြီး Condenser Water pump တွင် The suction head သည် အပေါင်းတန်ဘိုးဖြစ်သည်။
Begin with the total suction head calculation
1. The suction head သည် အနှုတ် (negative) တန်ဘိုးဖြစ်သည်။ The liquid level in the suction tank ၏ the liquid level သည် the centerline of the pump ထက်နိမ့်နေသည်။
hss = -6feet ( ပန့်တည်ရှိသည့်နေရာကို Elevation =0ft ဟုယူ၍တွက်ချက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အနှုတ် သင်္ကေတမှ စုပ်ယူရမည့် Fluid ၏ Elevation သည် Pump ထက် ၆ပေနိမ့်သည့်နေရာတွင်ရှိသည့်ဟုဆိုလိုသည်။ )
2. The suction tank သည် အပွင့် ပုံစံဖြစ်သည် (Open) , ထိုကြောင့် the suction surface pressure သည် atmospheric pressure နှင့် ညီသည်။
hps =0feet gauge ( atmospheric pressure သည် suction ဘက်နှင့် discharge ဘက်တွင် မှာပါ သက်ရောက်နေသည်။ထိုကြောင့် မည့်သည့်တန်ဘိုးထည်တွက်သည်ဖြစ်စေ ကျေသွားလိမ့်မည်။)
3. the suction friction head တွက်ယူရန်, (ဤစာမျက်နှာတွင် the suction friction head ကို မည့်သို့တွက်ချက်သည် မဖော်ပြပါ။4feet ဟုယူဆ၍တွက်သည်။)
hfs =4feet at rated flow ( friction loss calculation မှ ရရှိသည်။ friction loss calculation တွက်နည်းကို နောက် စာမျက်နှာများတွင်ဖော်ပြမည်)
4. The total suction head သည်agauge တန်ဘိုးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်atmosphere Pressuer ကို0အဖြစ်တွက်ချက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
hs = hss + hps - hfs = -6 +0-4= -10 feet of liquid gauge at rated flow
1. The static discharge head is:
hsd = 125 feet ( ပန့်တည်ရှိသည့်နေရာကို Elevation =0ft ဟုယူ၍တွက်ချက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။)
2. The discharge tank သည် အပွင့် ပုံစံဖြစ်သည် (Open) , ထိုကြောင့် the suction surface pressure သည် atmospheric pressure နှင့် ညီသည်။
3. The discharge friction head ကို ၂၅ feet ဟုယူဆ၍တွက်သည်။discharge friction head သည် pipe အတွင်းတွင်ရှိသော Fluid Velocity နှင့် Fitting အရေအတွက်တို့ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
4. The total discharge head is:
H = hd - hs = 150 - (-10)= 160 feet of liquid at rated flow
Note: did you notice that when we subtractedaminus number (-10) fromapositive number (150) we ended up withapositive 160.
vacuum application နှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပမာ ကို ဆက်လက်တွက်ချက်ပါမည်။ . Pipe friction တန်ဘိုးများကို Hydraulic Institute Engineering Data Book မှ ရယူရန်ဖြစ်သည်။ chart section
1. Transferring 1000 gpm. weak acid from the vacuum receiver to the storage tank. အက်စစ်ပျော့များထည့်ထားသည် အလုံပိတ်ကန်မှ တစ်မီနစ်လျှင် အက်စစ် ဂါလံ 1000 တွန်းပို့ရန်ဖြစ်သည်။
2. Specific Gravity - 0.98 (ထည့်ထားသော အက်စစ် ၏ သိပ်သည်းဆ Specific Gravity မှ 0.98 ဖြစ်သည်။)
3. Viscosity - equal to water (ပျစ်စေးမှု Viscosity သည် ရေ၏ ပျစ်စေးမှု Viscosity နှင့်တူညီသည်။)
4. Piping - All 6" Schedule 40 steel pipe - ပိုက်အမျိုးအစားများမှာ Schedule 40 အဆင့်ရှိသော steel pipe များဖြစ်သည်။
5. Discharge piping rises 40 feet vertically above the pump centerline and then runs 400 feet horizontally. There is one 90° flanged elbow in this line.
Dischargeပိုက်သည် ပန့်နှင့်မော်တာ မှ အထက် ပေ ၄၀ အမြင့်တွင်ရှိသည်။ ထိုနောက် လှောင်ကန်သို့ရောက်ရန် ရေပြင်ညီအတိုင်း ပေ 400 အရှည်ရှိသည်။ 90° flanged elbow တပ်ဆင်ထားသည်။
6. Suction piping hasasquare edge inlet, four feet of pipe, one gate valve, and one 90° flanged elbow all of which are 6" in diameter.
Suction ပိုက်တွင်asquare edge inlet, four feet of pipe, one gate valve, နှင့် one 90° flanged elbowတပ်ဆင်ထားပြီး ပိုက် diameter မှာ ၆ လက်မဖြစ်သည်။
7.The minimum level in the vacuum receiver မှာ the pump centerlineထက် ၅ ပေမြင့်သည်။
8. Vacuum လှောင်ကန်ထဲတွင်ရှိသော pressure မှာ 20 inches of mercury, vacuum ဖြစ်သည်။
the system ကို pump နေရာ မှ နှစ်ပိုင်း ပိုင်း၍ တွက်ချက်ပါမည်။
1. The suction side of the system showsaminimum static head of5feet above suction centerline. Therefore, the static suction head is:
2. Using the first conversion formula, the suction surface pressure is:
3. The suction friction head, hfs, equals the sum of all the friction losses in the suction line. Friction loss in 6" pipe at 1000 gpm from table 15 of the Hydraulic Institute Engineering Data Book, is 6.17 feet per 100 feet of pipe.
6" Square edge inlet 0.50 32 (a)
6" 90 flanged elbow 0.29 32 (a)
6" Gate valve 0.11 32 (b)
4. The total suction head then becomes:
hs = hss + hps - hfs =5+ (-23.12) - 2.0 = -20.12 feet, gauge at 1000 gpm.
1. Static discharge head = hsd = 40 feet
2. Discharge surface pressure = hpd =0feet gauge
3. Discharge friction head = hfd = sum of the following losses :
Friction loss in 6" pipe at 1000 gpm. from table 15, is 6.17 feet per hundred feet of pipe. In 440 feet of pipe the friction loss = 440/100 x 6.17 = 27.2 feet
Friction loss in 6" elbow:
4. The total discharge head then becomes:
c. Total system head calculation:
H = hd - hs = 69.7 - (-20.2) = 89.9 feet at 1000 gpm.